Isifo se-Newcastle yisinye sezifo ezinkukhu emhlabeni jikelele. Ngenxa yokuthi ayikho ikhambi,ukusolakala kufanele kubikwe ngokushesha ngangokunokwenzeka kuchwepheshe wezempilo wezilwane noma udokotela wezilwane kahulumeni, ozosiza ukugwema lesi sifo.
Iziqhumane zingashintsha kusukela ekubeni mnene kuya ezinzima, ngobukhulu kuye ngokuthi isifo esibangela ukucindezeleka, amandla alolu hlobo, ukuzivikela kwezinyoni ngokumelene nobunzima kanye nezinsuku zezinyoni ezinesifo.
Inkukhu kanye negalukuni zihlaselwa kalula kulesi sifo kunamahansi kanye namadada, kodwa ezinye izinhlobo zomdabu azihlaselwa kalula uma zisesimweni esihle.
Igciwane lithathelwana kakhulu. Kungasakazeka ngezinsalela zezinyoni ezithathelwanayo, nezinyoni ezinempilo ezithathelwanayo uma zidla ukudla noma ziphuza amanzi okonakele; noma kungase kube yomoya. Kungasakazeka ngokuhamba kwezinyoni, abantu kanye nezingubo zabo, imishini kanye nezinkukhu.
Yini Okufanele Uyibuke?
Izinkinga ngesifo seNewcastle ukuthi azikho izimpawu ezithile, okwenza ukuthi lesi sifo sivame ukudideka nezinye izifo.Izinyoni, ngokuvamile, zingaba buthakathaka futhi zicindezelekile, kodwa kungenzeka kungabi khona izimpawu zokutheleleka ngaphandle kokufa okungazelelwe.
Izimpaphe zezinyoni zingase ziphazamiseke futhi zingase zidle kancane kunokujwayelekile.
Ngezinkukhu ezibeka amaqanda, kungase kube khona ukwehla okungazelelwe kokukhiqizwa kweqanda kanye nekhwalithi lamaqanda, ngamaqabunga abe esethambile noma ekhubazekile futhi abamhlophe bebamanzi.
Ezinye izimpawu zizoxhomeka engxenyeni yomzimba otheleleke. Uhudo oluhlaza, noma olumhlophe lungase lube uphawu lokuthi umthamo uyathinteka.
Izimpawu ezithintekayo zomoya zibandakanya ukuphefumula kanzima nokuphuthumayo, ukukhwehlela, ukuthimula, ukukhipha noma ukusabalalisa.Ukuvuvuka kwekhanda nakho kuvamile.
Izibonakaliso ezikhathazayo zingaba ukuthuthumela kwemisipha, ukuphazamiseka, ukuhamba nobunzima noma ukukhubazeka okugcwele noma okuncane. Inhloko yenyoni ingahle iphendulwe noma ibanjwe phakathi kwemilenze futhi inyoni ingase ihambe emibuthanweni.
Lapho uhlola umzimba ngemva kokufa, ukutholakala kwesifo kungaboniswa yi:
ukhipha igazi esiswini
izindawo ezibomvu ezindaweni ezinamafutha ezizungeze inhliziyo noma amathumbu
ukuqukethwa kwamanzi emakhaleni
Njengoba kungekho ukwelashwa, izinyoni ezihlushwa yisifo seNewcastle kufanele zibhujiswe. Uma sekwaziswa, isazi sezempilo sezilwane sizosiza ukulawula nokuvimbela lesi sifo ukuba sisakaze nezinyathelo zokulawula ezibandakanya ukusetshenziswa kokuhlukaniswa, ukugoma okuphuthumayo, ukushisa inkukhu efile.
Indlela engcono kakhulu yokuvimbela lesi sifo ikugoma kanye nezinyathelo ezinhle zokuphephisa izinkukhu.Khumbula ukuthi yizinyoni eziphilile kuphela okufanele zigonywe.